Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Manao fihazakazahana ho an'ny fahasalamana ireo mpanatrika IMEX America
Mitsiky manodidina amin'ny hazakazaka IMEX Amerikana.
Namirapiratra tamin'ny alalan'ireo mpandray anjara tamin'ny #IMEXrun ny herin'ny Las Vegas izay natao vao maraina androany.
Nisy olona tena mazoto manatrika ny IMEX America izay misolo tena ny firenena 27 no nandeha tany amin'ny Las Vegas Strip hanao hazakazaka vao maraina androany.
Ny IMEX America dia mandeha ao amin'ny Mandalay Bay any Las Vegas amin'izao fotoana izao.
Ho an'ireo izay tsy nahavita ny fanazaran-tena vao maraina, ny fihodinana manodidina ny gorodona IMEX America dia atao amin'ny fomba ofisialy ho lap 1k.
Fivoriambe maneran-tany izany Amerika IMEX mpanatrika miaraka amin'ny olona mavitrika 250 mahery avy amin'ny firenena 27 izay nihazakazaka, nihazakazaka na nandeha an-tongotra nanaraka ny Strip malaza.
Ny sasany amin'ireo mpandray anjara #IMEXrun
Ny 5k #IMEXrun, noforonina sy nokarakarain'i Voqin ary tohanan'ny simpleview, dia fotoana iray vao maraina "hatsemboka" ao anatin'ny Amerika IMEX, atao ao amin'ny Helodranon'i Mandalay, Las Vegas, hatramin'ny 11 Novambra.
Hoy i Miguel Assis, Voqin Partner: “Isika rehetra dia mila mampiasa vola amin'ny fahasalamantsika fa tsy mankafy hetsika ara-tsosialy sy fisotroana cocktails fotsiny. Avy eo, azo antoka fa ny indostria iray manontolo dia afaka mihamatanjaka sy mifanentana kokoa mba hiatrehana izay hitranga amin'ny ho avy. "
Zava-misy mahafinaritra: Ireo mpanatrika IMEX America izay tsy afaka nanatevin-daharana ny hazakazaka dia mbola afaka mankafy ny fahasalamana. Ny fandehanana indray mandeha fotsiny manodidina ny gorodona IMEX America dia 1k amin'ny fomba ofisialy.